भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: खुल्दैछ पहिरो !
मुलखर्कको हिडन पनि गारो रसुवा, सदरमुकाम पुग्ने बाटो, यो हप्ता खुल्ने सँभावना रहेको बताईएको छ । बिषेशगरि दशै अघि नै बाटो खुल्ने सम्भावना छ । राम्चेको पहिरो अब नरहेपनि मुलखर्कको पुरै बगाएको बाटो अब कता लगेको छ त्यो हेर्न भने तेतै पुग्नुपर्ला जस्तो छ ।
यो देखिएको बाटोमा अब गाडी हिडने छ र तपाई काठमाण्डौबाट रु १७० मा सोझै यसलाई छलेर धुन्चे हुदै स्याफ्रु बसमा एकै दिनमा पुग्नु हुनेछ । त्यहाबाट पदयात्रामा एक दिनमै नगरकोटबाट देखिने लाङ्टाङ् हिमाल छुन पाइने छ ।
अनि अब लाङ्टाङ् घुम्न आउने स्वदेशी बिदेशी पर्यटकहरुको स्वागतमा उभिएको छ , रसुवा ! राजधानीबाट बाटो नबिराई २ दिनमा पुग्ने लाङ्टाङ् हिमाल् घुम्न कति पैसा लाग्छ भनि एक् मित्रको इमेल जवाफमा मैले लेखेको थिए- सुद्द शाकाहारी र नमातिने हो भने २ वटा हात्ती चढेर पुगिन्छ । तर त्यो भने तपाई आफैले चढनुपर्ने छ ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 9:41 AM